एउटा अनौठो विद्यालय :जहाँ कमाई पनि पढाई पनि यहाँका विद्यार्थी पढाई सकेपछि जागिर होइन जग्गा खोज्न थाल्छन्::Nepal's Online News Portal
एउटा अनौठो विद्यालय :जहाँ कमाई पनि पढाई पनि यहाँका विद्यार्थी पढाई सकेपछि जागिर होइन जग्गा खोज्न थाल्छन्
राम्रो शिक्षालयमा पढ्न पाइयोस्, पढेको कुरा तत्कालै व्यवहारमा लागू गर्न सकियोस् । अनि, पढ्दापढ्दै दाम पनि कमाउन पाइयोस् । अथवा, प्रमाणपत्र थपिँदै जाँदा धन पनि बढ्दै जाओस् । यस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो होला ?
कृषि नै किन ? यसको कथा नारायणसँग गासिएको छ । २०४२ सालमा वर्दियामा प्रवेशिका गरेपछि उनले प्राविधिक शिक्षा सिएमए पढ्न सुर्खेतमा प्रवेश परीक्षा दिए । पास भएछन् तर बेलैमा खबर पाएनन् । भर्ना हुन जाँदा समय सकिएकाले मौका पाएनन्
देशभरीका विद्यालयलाई जनज्योती जस्तै बनाउन पाए नेपाल कस्तो हुन्थ्यो होला ?ाम्रो शिक्षालयमा पढ्न पाइयोस्, पढेको कुरा तत्कालै व्यवहारमा लागू गर्न सकियोस् । अनि, पढ्दापढ्दै दाम पनि कमाउन पाइयोस् । अथवा, प्रमाणपत्र थपिँदै जाँदा धन पनि बढ्दै जाओस् । यस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो होला ?